Shina multi-axial an'ny Humerus Locking Plate orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
Vozony maro-axial an'ny humerus manidy lovia orthopedic implant
dia adiresy vaky sarotra amin'ny humerus proximal
2. Teknolojia fanodinana titanium sy mandroso;
Ny vozona multi-axial an'ny takelaka fanidiana humerus dia nanondro ny fivakisana sy ny fivakisana, ny osteotomies ary ny nononion an'ny humerus proximal, indrindra ho an'ireo marary manana taolana osteopenika.
Ampiasaina amin'ny screw4.0 hidin-trano, screw3.5 kortosy kodiarana ary .04.0 hodi-mandry, ampifanarahana amin'ny setan'ny fitaovana orthopedic 4.0 andiany
Tombo-kady multi-axial an'ny famaritana ny takelaka fanidiana Humerus
Vozona ny takelaka fanidiana Humerus
Ny takelaka fanidiana humerus dia voany amin'ny vaky sarotra amin'ny humerus akaiky.
Ny takelaka fanidiana ara-pitsaboana humerus dia voamarina ho an'ny fivakisana sy ny fivontosana, ny osteotomie ary ny tsy misy ny humerus proximal, indrindra ho an'ireo marary manana taolana osteopenika.
Ampiasaina amin'ny screw4.0 hidin-trano, screw3.5 kortosy kodiarana ary screw4.0 famafana foza, nifanaraka tamin'ny setra 4.0 an'ny fitaovana fandidiana.
Famaritana ny lohan'ny takelaka fanidiana
Ny takelaka taolana titanium vokarin'ny orinasanay dia noforonina araka ny TENIN'ANDRIAMANITRA amin'ny fikolokoloana ao AO, fenitra ISO5836 ary fenitra nasionaly na indostrialy mifandraika amin'izany. Ny lozam-pifamoivoizan'ny takelaka taolana titanium dia natao miaraka amin'ny pass iraisana sy ny pass threaded tsirairay avy. Ny takelaka titanium mahitsy sy anatomika dia natao ho an'ny loha araka ny firafitry ny taolana.
Ny takelaka taolana mihidy titanium misy amin'ny titanium, Orthopedics Locking Plates, fantatra amin'ny anarana hoe Locking Compression Plates koa, dia fitambaran'ny teknolojia fanidiana hidin-trano sy ny teknikan'ny plating mahazatra. Ny takelaka fanidiana orthopedika dia novokarina tamin'ny habe samihafa. Ny takelaka ary koa ny visy dia tafiditra ao anatiny. Ny rafi-pandrehitra manidy dia mahatonga ny fametahana takelaka tena mahatohitra tsy fahombiazana, satria ny visy dia tsy mivoaka, na mamaha azy.
Ny takelaka fanidiana taolana dia vokarin'ny titane tsy miasa izay mifanaraka amin'ny ISO5832-2 na GB / T 13810-2007. Noho izany, ny biocompatibility azy ireo dia tsara kokoa. Ny MRI sy ny CT dia azo tanterahina aorian'ny fandidiana. Omena fitaovana manohana manokana, mahatonga ny vokatra mora ampiasaina, azo antoka ary azo itokisana. Ny lavaka mitambatra misy lavaka misy kofehy sy lavaka famatrarana eo amin'ny lovia fanidiana dia azo ampiasaina amin'ny fanidiana sy famatrarana, izay mety amin'ny safidin'ny dokotera. Ny fifandraisana voafetra eo amin'ny takelaka misy ny taolana sy ny taolana dia mampihena ny fahasimban'ny famatsian-dra periosteal.
Ny takelaka taolana titanium ho toy ny implants orthopaedic dia omena ho an'ny toeram-pitsaboana, ary natao hitsaboana ny toerana misy ny mararin'ny marary ambanin'ny fanatoranana ankapobeny ataon'ny dokotera voaofana na efa za-draharaha ao amin'ny efitrano fandidiana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tontolo iainana.
Ny implants fixation anatiny dia ho voamarina tsara alohan'ny hampiasana azy, ary tsy hampiasaina eo noho eo raha misy ny fiovana sy ny vay. Fakafakao ny karazana vaky arakaraka ny sarimihetsika taratra X amin'ny tranokala tapaka, mandrafitra ny fomba fandidiana, ary safidio ny karazana sy ny famaritana ny takelaka taolana titanium. Ny takelaka taolana titanium dia esorina ao anatin'ny 2 taona aorian'ny fanasitranana ny vaky.
Teo aloha: Takelaka fanidiana hook Clavicle
Manaraka: Takelaka fanidiana miendrika Y Humeral eo aloha
Takelaka fanidiana tubular iray ampahatelony
2.0mm Titanium Locking Plate tanana rafitra
Atsaharo ny takelaka fanidiana radio
Takelaka fanidiana 3.0mm
Takelaka fanidiana Tibia mediale maro-axial
Sokiro famoretana tsy misy loha